जापान को सका रात्मक कुराहरुको जानकारी दिनु भएको मा शेखर जि लाई धन्यवाद ।
भन्छन नि 'जहा कङाल त्यहा चन्डाल ' हुन्छ रे । साय द अहिले को परिस्थिती यस्तै भएर होला हामी कहाँ इमान्दारिता क्रमश : हराउदै गएको छ तर भोली को सुध्रिदो परिस्थिती सँगइ पुन : ती इमान्दारिता पनि पलाएर आउँलान । अहिले लाई यो भन्दा बढी अरु के नै पो भन्न् सकिन्छ र !
र पनि ,
हामी कहाँ भएको पारी बारीक प्रेम चाँही जापा निज हरुको त्यो ब्यस्त र आधुनिक जिबन बिताउने हरुको लागि आर्दश हुदो रहेछ । यो चाँही मैले जापा निज हरु कै मुख बाट सुनेकी हुँ ।
भन्दा खेरी सका रात्मक कुरा त हामी सँग पनि छ । तैपनी तपाईंले जे उल्लेख गर्नु भो आर्टिकल मा त्यो चाँही हामी कहाँ खाचो छ ।
अब जहाँ सम्म " हामी कता जा पुग्दै छौ " भन्ने चिन्ताको सबाल हो , त्यस को यछ उत्तर त हामी आँफैले दिनु पर्ने हुन्छ अर्थात हाम्रो काध मा त्यो जिम्मेबारी आएको छ ।
हामी छौ हाम्रो सभ्य समाज छ - हामी छैन - हाम्रो सभ्य समाज छैन ।
धुक धुकी तिमी र हामी
मुटु हाम्रो सरकार
धमनी हाम्रो समाज
चिन्ता हाम्रो दरकार ।
चसक्क त दुख्छ नै
आँफैलाई गाली गर्नु पर्दा
घाऊ त हुन्छ नै
आफ्नै जरा कोतर्नु पर्दा ।
कोतरिएका घाऊ पुरिनु पर्छ
औषधी जिबन रसले
दाग लाई हताउनु पर्छ
सबको सक्दो कोशीसले ।
"कामरेड प्रचण्डको" शब्द सापटि लिएर भन्दा "जनता राम्रो भए नेता राम्रो हुन्छ" रे । जनतामा चेतनाको छडी चलाउने जारहरुको पनि मुलुकलाइ आवश्यकता पर्दो रहेछ कहिले काहि, अहिले सम्म हामीले त्यस्तो नभोगेकाले नै हामी धेरै छाडा छौ कि !
निक्कै रोचक र अनुकरणीय प्रसंग पेश गर्नु भएछ । सादारण नेपाली आँखाले हेर्दा 'यस्तो पनि हुन्छ र?" भन्नु पर्ने छ यि प्रसंगहरु ।
नेपालको सम्बन्धमा भने कानून बनाएर मात्रै यो सबै हल होला जस्तो लाग्दैन, घरका मुलिहरु आफ्नो ईज्जतमा नबसेसम्म र साधारण जनमानसमा यो नैतीकताको पाठ पुग्नै सक्दैन ।
शेखर जी सारै राम्रा प्रसंग सुनाउनु भयो। खास नेपालमा लेखेर मात्र हुदैन, ब्यबहारमा उतार्नु पनि महत्बपुर्ण छ।
हामी कांहा जादै छौ?
मलाइ त लाग्छ खाल्डोमा। सुन्दा नमज्जा लाग्छ तर सत्यता त्यही हो।